धनीभन्दा गरिबले धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने यो सच्याउनु पर्नेछ: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (सहि वा गलत)??कमेन्ट गर्नुहोस् ! – Taja Khawar
धनीभन्दा गरिबले धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने यो सच्याउनु पर्नेछ: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (सहि वा गलत)??कमेन्ट गर्नुहोस् !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २८, २०७८ समय: १९:०७:४६
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २८, २०७८ समय: १६:४९:५५
facebook sharing button 6messenger sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonprint sharing button
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा रहेको असमानता हटाउन पहल गरिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित सम्मेलनमा उनले यस्तो बताए। शर्माले भने, ‘गाडी किन्ने
कर्जामा थोरै ब्याज लाग्ने तर गरिबले लिने कर्जामा धेरै ब्याज लगाउने कार्य सच्याउनु पर्नेछ। ’उनले कर्जा प्रवाहमा ब्याजदर घटाएर सहज बनाउन सहकारी बैंक, सहकारी संस्था तथा लघु वित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गरे। उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको
विकास गर्न सहकारी बैंकको साथै लघुवित्त क्षेत्रले जोड दिनुपर्ने बताए। ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन लघुवित्तले उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरी सहजीकरण गर्छ। उत्पादनमा
जोड दिँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै उनले सहकारी संस्थाहरूले नाफामा प्रतिस्पर्धा नगरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी अन्त्य गर्ने तथा उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए। यो पनि : माओवादीले पैसाको खोलो बगाएर एमाले सांसद
किनेको खुलासा, यसरी खुल्यो पोल ! काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद विमला खत्री सम्पर्कमा आएकी छन् । तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन भनिएकी दाङ ‘ख’ उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित विमला उपचार गराइरहेको अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।
नेपालगन्जबाट उपचार गरेर उनी बुटवल फर्किसकेकी छन् । तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित विमलाले एकता भंग हुँदा माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । उनी पार्टी एकीकरण अगाडि एमाले भए पनि माओवादी रोजेपछि विभिन्न आशंकाहरु भएका थिए । जुन अहिले सत्य सावित भएको छ ।
Last Updated on: August 12th, 2021 at 7:07 pm